शेरबहादुर पुन - कान्तिपुर समाचार
शेरबहादुर पुनका लेखहरु :
फेरि कोभिडको अर्को लहर आए तर्सिनु पर्दैन
नेपालमा कोभिडको महामारी कम भएको छ । हाल औसतमा दैनिक ५-१० जना संक्रमितहरु देखिने गरेको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँदछ । मृत्यु भने शून्यमा झरेको धेरै दिन भइसक्यो । यो हाम्रो लागि राहत हो ।
ओमिक्रोन : उग्र की नरम भेरिएन्ट?
कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परे पनि आतंकित भाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मेरो मान्यता थियो । शिर्षकमा "उग्र की नरम" भन्नाले अघिल्लो भेरिएन्टभन्दा तुलनात्मक रुपमा कडा की कमजोर भन्न खोजिएको हो । अझ किटेरै भन्नु पर्दा ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टाभन्दा "उग्र की नरम" भन्न खोजिएको हो ।
झन्डै पाँच महिना अगाडि पहिलो पटक मैले 'पोष्ट एक्युट कोभिड-१९' अर्थात् 'लङ कोभिड' को बिरामी भेटेको थिएँ र त्यसपछि कोरोना उपचार पश्चात वा पीसीआर निगेटिभ भएपछि पनि केहीमा 'लङ कोभिड' को समस्या देखिँदै र थपिँदै आइरहेको छ । नेपालमा 'लङ कोभिड' भएकाहरुको यकिन तथ्यांक आउन केहि समय अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । 'लङ कोभिड' सम्बन्धी अनुभव समेटेर नेपालमा पहिलो पटक पाँच महिना अगाडि जानकारी/खोजमुलक लेख पनि प्रकाशित गरेको थिएँ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर : नेपालमा कति सम्भव ?
नेपालमा हालसम्म झन्डै दुई लाख मानिस कोरोना संक्रमणमा परेर निको भइसकेका छन् । थप हजारौं जना निको हुने क्रममा छन् । कोरोनाको लहर दोहोरिए पुनः संक्रमित भइने हो कि भन्ने चासो उनीहरूमा पाइन्छ ।